Etu esi eme ugwu mgbawa: ihe niile ịchọrọ ịma | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 15/09/2021 18:19 | Geology
Mgbawa ugwu bụ ihe owuwu ala ebe magma na -esi n'ime ụwa apụta. Ndị a na-amalitekarị na njedebe nke efere tectonic, nke sitere na ngagharị ha, n'agbanyeghị na enwerekwa ebe akpọrọ ọkụ, ya bụ, ugwu mgbawa dị ebe enweghị mmegharị n'etiti efere. Ịmara otú ugwu mgbawa si akpụ Ọ dịtụ mgbagwoju anya, yabụ, anyị ga -akọwa ya n'isiokwu a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka esi akpụpụta ugwu mgbawa, nke a bụ ọkwa gị.
1 Kedu ka ugwu mgbawa si amalite
2 Ọnọdụ ọzụzụ
3 Akụkụ nke ugwu mgbawa
4 Ọrụ mgbawa
5 Kedu ka mgbawa ugwu na mgbawa si apụta
Mgbawa ugwu bụ oghere ma ọ bụ gbajie na mbara ala nke na -esi na ya na -awụpụ magma ma ọ bụ lava n'ime ime ụwa n'ụdị lava, ntụ ugwu mgbawa, na gas na oke okpomọkụ. Ha na -etolite na nsọtụ tectonic.
Volcanoes nwere oke kọntinent: Mgbe usoro imebi ihe na -eme, efere oke osimiri (njupụta dị elu) na -ebute efere kọntinent (obere okpu). Ka ọ na -eme nke a, ihe e merụrụ emerụ na -agbaze wee mepụta magma, nke na -esi na mgbawa pụta wee chụpụ ya n'èzí.
Oke ugwu na-agbọpụta n'etiti-oke osimiri: ugwu mgbawa malitere mgbe efere tectonic kewara wee mepee oghere nke ebili mmiri nke ebili mmiri na -akwagharị na magma nke a na -emepụta n'uwe elu ya.
Volcanoes na -ekpo ọkụ: ugwu mgbawa na -emepụta site na ogidi magma na -arị elu nke na -esite na mbara ụwa wee gbakọba n'oké osimiri iji mepụta agwaetiti (dị ka Hawaii).
N'ikwu ya n'ozuzu, anyị nwere ike ịsị na ugwu mgbawa nwere ike ịnwe ụdị dị iche iche dabere na njirimara ụfọdụ nke nhazi ha (dịka ọnọdụ ma ọ bụ usoro a kapịrị ọnụ), mana akụkụ ụfọdụ nke mgbawa ugwu bụ ntọala nke mgbawa ugwu niile. A kpụrụ ugwu mgbawa dị ka nke a:
N'ebe oke okpomọkụ, magma na -akpụpụta n'ime ụwa.
Gbago n'elu elu uwa.
Ọ na -agbawa site na mgbawa dị n'ime ala na site na isi iyi n'ụdị mgbawa.
Ihe ndị a na -akpọ Pyroclastic na -agbakọba na mbara ala nke ụwa ka ọ bụrụ cone mgbawa ugwu.
Ozugbo ugwu mgbawa malitere, anyị na -ahụ akụkụ dị iche iche na -etolite ya:
Ndagwurugwu: Ọ bụ oghere nke dị n'elu ma ọ bụ site na ya ka a na -achụpụ ntụ, ntụ na ihe niile pyroclastic. Mgbe anyị na -ekwu maka ihe pyroclastic, anyị na -ekwu maka iberibe oke okwute mgbawa ugwu, kristal nke mineral dị iche iche, wdg. E nwere ọtụtụ olulu mmiri ndị na -adịgasị iche na nha na agbanyeghị, ọ bụ ezie na nke kachasị bụ na ha dị okirikiri na obosara. Enwere ụfọdụ ugwu mgbawa nwere ihe karịrị otu olulu.
Esi mmiri ọkụ: ọ bụ otu akụkụ nke ugwu mgbawa nke na -enwekarị mgbagwoju anya na ndagwurugwu ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ nnukwu nkụda mmụọ na -amalite mgbe ugwu mgbawa na -ewepụta ihe niile n'ime ụlọ magma ya na mgbawa. Caldera na -emepụta ụfọdụ adịghị ike n'ime ugwu mgbawa nke ndụ nke na -enweghị nkwado nhazi ya.
Ihe mgbawa mgbawa: ọ bụ mkpokọta lava na -esi ike ka ọ na -ajụ oyi. Akụkụ nke cone mgbawa ugwu bụ pyroclast niile na -abụghị ugwu mgbawa nke sitere na mgbawa ma ọ bụ mgbawa na -ewepụta oge.
Ọkpụkpụ: bụ ntụpọ ndị na -eme na mpaghara ebe a na -achụpụ magma. Ha bụ ntụpọ ma ọ bụ gbawara agba nwere ogologo ogologo nke na -enye ikuku n'ime ụlọ yana nke na -eme na mpaghara ebe a na -awụpụ magma na gas dị n'ime ya.
Usekwu: ọ bụ ụzọ esi ejikọ ọnụ ụlọ magma na oghere ya. Ọ bụ ebe ugwu mgbawa ebe a na -eduzi ntụpọ maka ịchụpụ ya. Karịa nke ahụ, gas ndị na -ewepụta n'oge mgbawa na -agafe mpaghara a.
Daịkị: Ha bụ usoro dị egwu ma ọ bụ nke magburu onwe ya dị ka tube. Ha na -agafe akwa nke dị n'akụkụ okwute wee sie ike mgbe ọnọdụ okpomọkụ daa.
Ụlọ: Ọ bụ mkpokọta ma ọ bụ mkputamkpu ahịhịa nke na -esite na mmiri dị larịị nke na -enweta ọdịdị okirikiri. Igwe ọkụ a siri ike nke na enweghị ike ịgagharị ebe ọ bụ na esemokwu esemokwu siri ike na ala.
Maticlọ magma: Ọ bụ ya kpatara ịchịkọta magma nke na -esite n'ime ụwa. A na -ahụkarị ya na omimi miri emi ma ọ bụ nkwụnye ego na -echekwa okwute a wụrụ awụ nke a maara dị ka magma.
Dabere na ihe a na -eme ugboro ugboro nke ugwu mgbawa na -agbawa, anyị nwere ike ịmata ọdịiche nke ụdị ugwu mgbawa dị iche iche:
Volcano na -arụ ọrụ: na -ezo aka ugwu mgbawa nke nwere ike ịgbawa n'oge ọ bụla ma nọrọkwa na ọnọdụ ihi ụra.
Ugwu na -agbọpụ ọkụ: Ha na -egosi ihe ịrịba ama nke ọrụ, nke na -agụnyekarị fumaroles, isi mmiri na -ekpo ọkụ, ma ọ bụ ndị na -ehi ụra ogologo oge n'etiti mgbawa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ka e weere na ọ naghị arụ ọrụ, ọ ga -abụrịrị na ọtụtụ narị afọ agafeela kemgbe mgbawa nke ikpeazụ.
Ugwu na -agbọpụ ọkụ: Ọtụtụ puku afọ ga -agarịrị tupu a na -ewere ugwu mgbawa na -ala n'iyi, n'agbanyeghị na nke a anaghị ekwe nkwa na ọ ga -eteta n'otu oge.
Kedu ka mgbawa ugwu na mgbawa si apụta
Mgbawa ahụ bụ otu n'ime njiri mara nke ugwu mgbawa, nke na -enyere anyị aka ịkewa ya na ịmụ ya. Enwere ụzọ atọ dị iche iche nke mgbawa ugwu mgbawa:
Mgbawa Magma: A na -ewepụta gas na magma n'ihi mbibi ya, na -ebute mbelata njupụta, nke na -eme ka magma nwee ike ịpụta elu.
Mgbawa Phreatomagmatic: Ọ na -eme mgbe magma batara na mmiri ka ọ jụọ oyi, mgbe nke a mere, magma na -agbawa elu ma magma gbawaa.
Ọkụ ọkụ: Ọ na -eme mgbe mmiri nke na -ejikọ na magma na -ekupụ, ebe ihe gbara ya gburugburu na ụmụ irighiri na -agbapụta, naanị magma na -afọdụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ugwu mgbawa dị mgbagwoju anya nke ukwuu, ndị ọkà mmụta sayensị na -amụkarị ya iji nwaa ịkọ amụma mgbawa ya. Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara otu esi akpụpụta ugwu mgbawa na ihe njiri mara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ka ugwu mgbawa si amalite
Anticyclone: ​​njirimara na ụdị